ifg [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/4/4f64a236a0d6ee6daa217bbac25be2d3.xhtml failed
IFG na ihany koa hoe http://www.infogasy.net dia Sehatra Informatika Malagasy napetraka mba hahafahana mifanakalo, mizara, mifanoro hevitra sy traikefa eo amin’ny resaka Informatika sy Telecommunications ary natao ho an’ny rehetra tsy ankanavaka.
Misy zavatra hita ao amin’ny sehatra :
Ny http://infogasy.net : Ny pejy fandraisana. Jereo ny fikokajojana azy, na ireo zavatra mbola mila atao
Ny Lahatsoratra : Ireo lahatsoratra nosorotan’ireo mpanoratra samihafa
Ny Forum : Hifanakalozana hevitra
Ny Wiki : Ito sehatra ito ho fiaraha-miasa. Azonao jerena ny Fikojakojana ny Wiki
Tantaran'ny sehatra (milahatra araka ny daty farany)
Aog-Sept 2007 : Update drupal + module serasera nataon’i hery(tsy hard-coded intsony ny fidiran’ny namana serasera) — lapino 2007/10/25 02:44
02 Aprily 2006 : Nalaina ny domaine infogasy.org mba hahafahana mametraka ireo tetik’asa isan-karazany. — fraz 2006/05/03 13:29
26 marsa 2006 : Nahitsin’i lapino ny fidirana ato amin’ny wiki mba hazava kokoa. — hery 2006/03/27 09:45
25 marsa 2006 : Nampifandraisina ny fitantanana sy ny maha mpikambana ao amin’ny takelaky ny IFGwiki sy ny IFGportal. — hery 2006/03/26 00:41
19 marsa 2006 : Nanamboatra sy nametraka theme vaovao ho an’ny drupal sy ny wiki i Lapino. — fraz 2006/03/27 10:32
Marsa 2006 : Namindra ny domaine infogasy.net mba hahafahana mahazo rohy madio. Nandamina ny répertoire isan-karazany ihany koa. Eo ihany koa ny fanomanana ny fananganana ny Association Informatika Malagasy amin’ny fomba ofisialy.
Faramparan’ny Febroary 2006 : Tapaka ny hevitra fa dia ho avadika Drupal ny CMS miasa eto amin’ny sehatra. Ny jspwiki dia navadika ho DokuWiki ihany koa. Efa manomboka vita ny ankabeazan’ny famindrana ny données teo aloha. Ny namana hery avy ao amin’ny http://serasera.org ihany koa dia nanome ny module drupal hahafahan’ireo mpikambana ao amin’ny serasera miditra avy hatrany eto amin’ny IFG. Nanampy betsaka tamin’ny fametrahana izany i Lapino. Ny kinova drupal miasa dia ny 4.6.5 ary ny DokuWiki kosa dia ny 2006-03-05.
15 Febroary 2006 : Nifampidinika ireo mpikambana samihafa . Ny zavatra azo tsoahiana dia hoe mila zavatra hahafahan’ny rehetra mandray anjara haingana sy tsotra (anisan’izany no nanajanonana ny DotNetNuke) , ohatra hoe hahafahana mametraka commentaire haingana amin’ireo vaovao mivoaka, mametraka rakitra amin’ny Wiki sy ny Forum izay efa mipetraka. Mety hahavaha izany olana izany ny fametrahana karazana blog/cms izay mora ny mametraka vaovao sy manamora ny fametrahana commentaires. Manaraka izany ny resaka hebergement, amin’izao fotoana izao dia mbola an-trano no hanaovana azy izany hoe misy serveur manokana (Tomcat moa izany amin’izao no tena mitondra azy ao), ny fitantanana izany anefa dia tsy mora (misy vidiny ihany koa, dia eo koa ny mety ho fifindra-monina tampoka), etsy an-danan’izany midina ihany koa ny vidin’ny resaka hebergement amin’izao fotoana izao izay miha mora fa tsy tahaka ny taloha. Ireo zavatra mora ireo anefa dia php/MySQL no tena betsaka, ary ny resaka jsp/servlet dia vitsy no mora moa tsy manana afa tsy WEB-INF iray ihany. Dia mbola mandinika kely aloha fa angamba angatahana hevitra amin’ny be sy ny maro dia ho hita eo ny tohiny.
Janoary 2006 : Nanomboka namadika ireo lahatsoratra tsikelikely tao @ Wiki , isaorana betsaka ny namana Lapino tamin’ny fanatevenana izany. Manomboka fenofeno izy izao , nefa efa sady mieritreritra ny version 3 ihany koa sy ny ho avin’ny IFG.
Faramparan’ny taona 2005 : Dia nandeha teny ny andro sy ny volana. Mitombo hatrany ny Rakitra ao anatin’ny Wiki sy ny Forum. Ny fiainana koa anefa sady mandeha ihany , teo ny fifindra-monina isan-karazany. Ny serveur koa tsy maintsy atao manaraka izay ka nisy fahatapahana vitsivitsy teny antenantenany teny.
12 Jiona 2005 : Nanampy cache mba hanafaingana ny fijerena ny sehatra. OSCache an’i OpenSymphony no nampiasaina. Ireo pejy amin’ny teny frantsay sy ny teny anglisy aloha no tena hahitana ny fiasany.
30 May 2005 : Fanovana ny skin amin’ny DotNetNuke hitovy amin’ny pejy famintinana. Fanovana skin ny Wiki sy ny Forum. Nametraka Blog ihany koa.
20 May 2005 : Activation interface XML-RPC amin’ny Wiki. Misy ohatra client ato : XMLRPCWiki
May 2005 : Nanampy module HTTPCompression amin’ny DotNetNuke mba hampiakarana ny hafainganan’ny famakiana lahatsoratra.
Aprily 2005 : Nanao pejy fandraisana mba hamintinana ny zavatra miseho eto amin’ny sehatra sy ny sehatra miresaka Informatika Malagasy hafa. Misy praograma miodina mitsipona ny vaovao amin’ny sehatra hafa na ireo misy Syndication (rss/rdf) na ireo tsy misy. Ny teknolojia miasa ambadika dia Mono/C#/Linux ary ny mampiseho kosa dia Jakarta Struts.
Mars 2005 : Feno herintaona ny Sehatra Informatika Malagasy. Nanomboka nanao ireo praograma fitantanana ny Sehatra mba tsy handaniana fotoana be intsony.
Febroary 2005 : Nanao famindrana ny Forum phpbb hivadika hoe JForum
Febroary 2005 : Nanao famindrana ny CMS hivadika DotNetNuke
04 Janoary 2005 : Nisy nanafika ny sehatra Faille phpbb highlight
Desambra 2004 : Nametraka ny Wiki Infogasy (JSPWiki mbola andrana ihany izy tamin’izany)
Desambra 2004 : Nanomboka teto dia hita fa mandreraka sy sarotra ny mitantana sehatra. Niezaka nampifanakaiky ny teknolojia fampiasanay amin’ny andavanandro sy ny eto amin’ny sehatra izahay mba hahamora ny fitantanana. Teny antenantenany teny moa ny fivadihana serveur, ISP, hebergeur tsy lazaina intsony. Nanapa-kevitra ary fa dia hatao serveur dedie amin’izay aloha dia ho hita eo. Ny serveur na loha-milina manodina ny sehatra dia Linux/Windows.
Juillet 2004 : Nametraka patch sy mod phpbb samihafa (Syndication)
Mai 2004 : Nametraka Mailing List (ezmlm dia nivadika Mailman)
Aprily 2004 : Nanampy CMS hahafahana manoratra Lahatsoratra (SPIP no nampiasaina)
17 Martsa 2004 : Nanomboka ny sehatra Informatika Malagasy Forum no niantobohany (phpbb no nampiasaina). Ny anarana Infogasy dia soso-kevitra avy tamin’ny namana tao amin’ny GNU/Linux Malagasy.
ifg.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43